Wasiirka Caafimaadka Lubnaan Xamad Xasan oo ka hadlay Qaraxii Shalay ee Dalka Libnaan | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wasiirka Caafimaadka Lubnaan Xamad Xasan oo ka hadlay Qaraxii Shalay ee Dalka...
Wasiirka Caafimaadka Lubnaan Xamad Xasan oo ka hadlay Qaraxii Shalay ee Dalka Libnaan
Wasiirka Caafimaadka Lubnaan Xamad Xasan ayaa sheegay in dad ka badan 50 qof ay ku dhinteen 2,700 oo kalena ay ku dhaawacmeen inta la ogyahay ilaa hadda qaraxyadii aadka u xoogganaa ee galinkii dambe ee maanta ka dhacay dekedda ku taal caasimada Lubnaan ee Beirut.
Kumanaan qof oo iskugu jira dad dhintay iyo kuwo nool ayaa la rumeysan yahay iney ku hoos jiraan burburka daaraha soo dumay, kuwaasoo ay adag tahay in deg deg halkaas looga soo saaro.
Waxa sababay qaraxyadab ma cadda, balse wararka soo baxaya qaarkood ayaa sheegaya in bakhaar lagu keydiyay walxaha qarxa inuu qaraxa ka dhashay.
Israel ayaa iska fogeysay inay iyadu ka dambayso qaraxan, maaddaama ay horay Xisbollaah ugu eedeeynaysey inay hub kala deggaan dekeddan la qarxiyey.
Ra’isal Wasaaraha Lubnaan Xasan Diab ayaa ballanqaaday in dhacdadaan argagaxa laheyd aan laga gudbi doonin isla xisaabtan la’aan.
Warbaahinta ayaa ku tilmaamtay qaraxaan midkii ugu weynaa ee ka dhacay caalamka qarnigan, waxaa ku burburay dekeddi weyneyd ee Beirut iyo dhismayaashii ku dhowa, waxaa lagu qiyaasay masaafada uu qaraxa burburiyay 10-KM oo isku wareeg ah, dhawaqa iyo dhul-gariiska ka dhashay qaraxa ayaa gaaray jasiiradda ku taal badda dhexe ee Cyprus oo 240KM ka fog Beirut.
Ilaa hadda dalka Qatar ayaa gurmadkii ugu horreeyey oo ah isbitaallada guur guura u diray magaalada Beirut, xilli dhaawaca uu buux dhaafiyay isbitaallada Beirut.
Ra’iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa waxa uu sheegay in waddankiisa uu taageero la garab istaagayo Lubnaan, aadna uu uga xunyahay dabka masiibada ah.
War hadda na soo gaarayna waxaa uu sheegayaa in dowlada Lubnaan ay ku dhawaaqday in Beriut ay ka dhacday masiibo uusan aaduhu qiyaasi karin, iyadoo caalamka ka dalbatay gurmad deg deg ah, saddex maalmood oo baroordiid ah ayayna dowladu sheegtay sidoo kale.
La soco wixii soo kordha
Previous articleDuqii magaalada Beyrut oo warbaahinta Horteeda ku ilmeyey
Next articleBeesha Caalamka oo loogu Baaqay in soo Faragalisa Qal qal Siyaasadeedka ka jira Dalka Soomaaliya
Siyaasada Guud Murusade waa lagu Dulmiyay iyagana Wey Is Dulmiyeen !!(Akhriso Xilalka ay dowlada ka hayaan iyo sida ay u kala qaateen)
Halkaan ka Daawo waa kuma Musharax Xasan Cali Kheyre
Libya oo dib u furtay Ceelal shidaal oo muhiim kadib heshiis dhacay
School teacher rapes two young girls in Mogadishu’s Karan district
Presidential Staff Arrested for Outrageous Video
Insecurity in Mogadishu due to rising rents
International community seeks to bring together President Farmajo and the two...
The success of the Dhusamareb conference is yet to take place.
Madaxweyne Farmaajo oo la weydiuyo Ciidanka uu Gobolka Gedo ka Qaadaayo...